एउटै वडाबाट ४ करोडको सुन्तला बिक्री , नाम्सीकोट सुन्तला ब्लकमा १ सय ३३ किसान आबद्ध - Aasha News
एउटै वडाबाट ४ करोडको सुन्तला बिक्री , नाम्सीकोट सुन्तला ब्लकमा १ सय ३३ किसान आबद्ध
Prakash Adhikari January 20, 2022
मझुवा खैरेनी(तनुहँ), ६ माघ। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–११ नाम्सीकोटका कमल महतको परिवारले गाउँको पाखो बारीमा झण्डै दुई हजार सुन्तलाका बोट लगाएको छ । कोदो मकै फल्ने बारीमा लगाइएको १२ सय बोटले फल दिन थालिसकेको छ ।
महत परिवारले यो वर्ष सुन्तला विक्रीबाट ४५ लाख रुपैयाँ आम्दानी लिन सफल भएको बताउनु हुन्छ । महत आफैंले काठमाडौंको कालीमाटी बजारसम्म सुन्तला पुर्‍याएर विक्री गर्नुभएको हो । ‘यसपालि राम्रो फलेको थियो । बेलाबेलामा वर्षात हुँदा कुहिएर धेरै झरे । पानी नपरेको भए अझ धेरै कमाई हुन्थ्यो होला’, उहाँले भन्नुभयो ।
सुन्तला बिक्रीबाट भएको कमाइबाट करिब ५ लाख रुपैयाँ त गोडमेल, खनजोत, औषधिउपचार र मलजलमा खर्च हुने महतको भनाई छ ।
जरेबरका दुर्गा भुजेल पनि यसपालि सुन्तला विक्रीबाट मनग्य आम्दानी लिन सफल हुनुभयो । १३ लाख ९० हजार रुपैयाँको सुन्तला उहाँको बगानबाटै विक्री भएको हो ।
आम्दानी भएको रकमबाट २ लाख रुपैयाँ गोडमेल र खनजोतका लागि छुट्याएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बाँकी रकम केही घर खर्चमा सकिन्छ त केही रकम बचत समेत हुन्छ । ‘कोदो मकै लगाउन छाडेर बारीभर सुन्तला मात्र लगाएका छौं । आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सुन्तला बनेको छ पछिल्ला वर्षहरूमा’, भुजेलले भन्नुभयो ।
बगानको सुन्तलाले बजार पाउनलाई कुनै समस्या नरहेको भुजेलले जानकारी दिनुभयो । ‘सुन्तला टिप्ने बेला भएपछि बगान ठेक्कामा लिनलाई घरघरै ठेकेदार आउँछन् । ठेकेदारको खोसाखोस हुन्छ’, उहाँले थप्नुभयो, ‘सुन्तलाको बजार राम्रै छ । मूल्य त्यति राम्रो पाउन सकेका छैनौं । मेहनतको अनुसार मूल्य नपाएको जस्तो लाग्दछ ।’
सुन्तलाका लागि हावापानी र माटो उपयुक्त भए पनि यस क्षेत्रका किसानले ६० को दशक पछाडि मात्र व्यावसायिक सुन्तला खेती थालेका हुन् । सुन्तला खेतीमा लागेपछि किसानको जीवनस्तर उकासिएको सुन्तला जात फलफूल ब्लक सञ्चालक समिति नाम्सीकोटका अध्यक्ष जगत महत बताउनु हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको नाम्सीकोट सुन्तला ब्लकमा १३३ किसान आबद्ध छन् । समूहमा आबद्ध हरेक किसानले कम्तीमा १ लाख रुपैयाँदेखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म वर्षेनी आम्दानी लिने उहाँले बताउनु भयो ।
यो वर्ष झण्डै ४ करोड रुपैयाँको सुन्तला ब्लक क्षेत्रबाट बाहिरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विगतका केही वर्षयता वर्षेनी ४ करोड रुपैयाँकै हाराहारीमा सुन्तला विक्रीबाट किसानले आम्दानी लिँदै आएका छन् । ‘कोदो मकैको खेती गर्ने चलन त यतातिर हराइसक्यो । सबै सुन्तला खेतीमा रमाएका छन् । आम्दानी राम्रो भएपछि सबैको दिलोज्यान सुन्तला खेतीमा छ’, ब्लक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महतले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार गाउँका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर सुन्तला खेतीमा रमाइरहेका छन् । सुन्तलाका बिरुवाको स्याहारसुसारमा व्यस्त हुन्छन् ।
सुन्तला टिप्ने बेलामा दैनिक ६० जनासम्मले रोजगारी पाउने सुन्तला जात फलफूल ब्लक सञ्चालक समितिका सचिव नारायण सिग्देलले बताए । ‘सुन्तला टिप्ने, ग्रेडिङ गर्ने, सडकसम्म बोकेर ल्याउने र लोड गर्नलाई स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । टिपेर सकिएपछि फेरी एक महिना गोडमेल गर्नलाई पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो । सुन्तला टिप्न र गोडमेल गर्न जानेले दैनिक सात सय रुपैयाँसम्म ज्याला पाउँछन् ।
मुआब्जाको नाममा अरुण तेस्रो आयोजनामा स्थानीयको अवरोध ; लगानी बोर्डले पावरहाउस क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा दिन बिलम्ब गरेको गुनासो
मिस ग्लोबल इन्टरनेशन २०१४ यौन शोषण प्रकरणः पीडकलाई कारबाही गराउन माइतीघरमा प्रदर्शन ; सरकारद्धारा छानबिन समिति गठन
मारिऊपोलमा युक्रेनी सेनाद्धारा आत्मसमर्पण, अब रुसले के गर्ला ?
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको उपकप्तानमा रोहितकुमार पौडेल ; २१ बर्षे क्याप्टेन सन्दीपलाई १९ बर्षे पौडेलको साथ ; विश्वकप लिग २ मा ज्ञानेन्द्र बाहिर
कांग्रेस एक्लैले जित्यो ३ सय ६ पालिका !१८ स्थानीय तहमा अग्रता !! गठबन्धनले दुई तिहाई जित्ने स्थिति !!!
बिराटनगरमा कांग्रेसका नागेश कोइराला विजयी ;प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै काठमाडौंका बालेन, ललितपुरका चिरिबाबु, पोखराका धनराज, भरतपुरकी रेनु र बीरगञ्जका राजेश
‘एमसीसीमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा असर गर्ने प्रावधान छैन’